Myanmar Gays Heaven: နတ်သားလေး.....ရဲ့....ဟိဟိ
ဆော်နဲ့ တူသောအလိုးခံချင်..စုတ်ပေးချင်သောဘော်ဒါများအလိုရှိသည်..ရန်ကုန်တွင်နေရာရှိသောသူများအဆင်ပြေသည်..လီးတွင်ဂေါ်လီပါပြီ6းလက်မကျော်ရှည်သည်..စိတ်ဝင်စားပါက nattharlay69@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိင်ပါသည်
Posted by Myanmar Gays Heaven at 10:35 AM
Htoo Phyoe April 20, 2014 at 9:39 PM
ခံချင်​လွန်းလို့ပါ ဆက်​ဖြစ်​​အောင်​ဆက်​ပါ​နော်​ 09 431 61653
l wanna getalife companion for long time
goodlooking handsome man
goodwill good temper
please contact 250068915
alfa mike May 7, 2014 at 1:03 AM
martin chit April 24, 2014 at 5:37 AM
There is no man in this site
All r gay
This is gay site
welcome myanmar man naked
နေနေ May 26, 2014 at 3:59 AM
ရင်.ထော်နေတာပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းလဲမရှိ အားဆေးကျွေးရမယ်ထင်တယ်
Wai Yan July 3, 2014 at 10:18 AM
Ever top July 24, 2014 at 4:46 AM
ဒီလောက်စုတ်ပြတ်နေတဲ့လီး လီးမှဟုတ်ရဲ့လားဟ နတ်သားလေးတဲ့ ငရဲသားမီးကျွမ်းထားသလားမှတ်ရတယ်
နေ ရာရှိရင် အခု ခေါ် ပါ
အမြန် လိုးပေးမည် လီကို
ဂွင်း မထု ချင်ပါ
လိုင် သာ ယာက ပါ
bot များ ခံချင် ရင်
မုတ် ချင် ရင်
နေ ရာ ရှိ ရမည်
Anonymous September 19, 2014 at 2:01 PM
bot လုပ်ကြည့်ချင် သည်
နားလည်မူ့နှငိ့ နေရာ ရှိ သောရန်ကုန် ကfriends များ လျှိူဝှက်စွာ ရေရှည်တွဲမည် Now reply me
ကောင်း ပြီ လေ လျှို ဝှက်ဖုန်းနံ ပါတ် နဲ့ဆက် သွယ် ကြ မယ် လေ ကဒ် တခု ဝယ်ပြီး နံ ပါတ် တင် ပေး မယ် လေ ယူ နံ ပါတ် လဲ တင် ပေး ပေါ့ဒီ ကိစ္စ အတွက်ပဲ သုံးမဲ့ နံ ပါတ် ပေါ့reply
လီးကြီးသည်ခံနိုင်မှဆက်သွယ်ပါအခြောက်မ မကြိုက် 09425301542 viber မှhi ပါ
komg kyue October 16, 2016 at 2:19 PM
Na Di Soe December 6, 2014 at 9:44 PM
Want to need?
royallover22 December 28, 2014 at 6:54 AM
nat thar lay le ka ng le laut taung machi bu
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:25 PM
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:26 PM
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:28 PM
Anonymous February 2, 2015 at 8:59 PM
gay ကြိုက်သူ May 5, 2015 at 11:42 PM
မှုတ် ပေးချင်သောgay ရှိ ရင် Reply လုပ်ပေးပါ ရန်ကုန်ကပါ ဖင် ကိုလဲ လိုးပေးပါမည် နို့သီးကောင်းမွန်စွာ စူ ထွက်နေပြီးမိန်း ကလေးနှင့် တူပါ နို့ အုံ လေးကို ကောင်း ကောင်း စို့ ပေးပြီးယုယပါမည် အကောင် သေးလျှင် ပိူကြိူက်၏
viber 09797508802 mdy need top
Ye Lin May 8, 2015 at 3:21 AM
eheh May 21, 2015 at 5:56 AM
shadow catcher June 14, 2015 at 3:56 AM
0060128503124 ခန့်မိုးသူ လို့ခေါ်ပါတယ် viber သုံးတယ်ဗျ ver ပါ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ တံတားဖြူမှာနေပါတယ်
gipsy bird July 1, 2015 at 8:41 AM
kyalsin moe July 31, 2016 at 7:23 AM
hero August 6, 2015 at 5:10 PM
mdy ka 09257806990
Moe Thauk December 1, 2015 at 6:57 PM
gipsy bird Only connect to me ok?
ဖင်ခံချင်သူများဆက်သွယ်ပါ အိမ်ရှိသည် 092613222739 မိန်းမဆန်သောသူများတာ
Henrylin November 27, 2016 at 8:29 AM
Hi can I ?
တိမ်ယံပေါ်မှာ ချစ်ကြမယ် January 20, 2016 at 4:08 PM
thuyamin May 7, 2016 at 2:48 AM
ရန်ကုန်မှာပ့ ph: 09401603336 connet me in yangon